Yatanarpon Web portal - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by AungMyintMyat on October 2, 2010 at 3:16pm in Point of View
I am wishing to get all myanmar IT pros view on YTP Web Portal!
Lets discuss about that under this topic!
Please feel free to reply my topic! Tags:
Permalink Reply by Mg Pyone on October 2, 2010 at 8:23pm - The spelling "Yatanarpon" should be yadanarpon in my opinion.
my other point of view. Frankly, I expected too much about this website ( because I heard some rumors that it'savery big project with large amount of money )
- Wed Design should be better than it. don't understand why usealot of Flash . :S
- The colorful nav bar should be more attractive.
- Should useaCSS Framework like BluePrint or 960gs for Grid, Font and Containers . it's like no css padding between posts and image.
- I like that its has rich update information. very great! but I don't see any option for RSS Feeds. Normally, I read news through Google Reader and add sites to my reader. but I don't found any thing else sadly !_!
. and I like to know kindly that the fact why our National Web Portal isn't using Myanmar3 and why not ?
another thing, why wikimyanmar.co.cc is မြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း ? then what's http://my.wikipedia.org ?
Sure, I'm aggressive.
Permalink Reply by Myint Kyaw Thu on October 3, 2010 at 10:42am >> Should useaCSS Framework like BluePrint or 960gs for Grid, Font and Containers . it's like no css padding
>> between posts and image.
Mg Pyone only knows CSS. Do you actually believe thatawebportal with that much budget will useamere CSS technology? With budget that big, they are using entirely different technology beyond our comprehension! :D
Permalink Reply by Mg Pyone on October 3, 2010 at 11:59am :D
yea. I just lookaglance . I believe that they are using entirely different technology . so, it should be better :D
Permalink Reply by Aung Aung on October 3, 2010 at 9:52pm နည်းပညာက အရမ်းမြင့်တော့ ရွာကကော်နတ်ရှင်နဲ့ အဆင်မပြေဘူးဗျ...
MITP က Grand Master ကြီးကို ကွန်းနတ်ရှင် ပင့်ဖို့ အရင် အကူအညီတောင်းမှ ထင်တယ်.. :)
Permalink Reply by AungMyintMyat on October 4, 2010 at 3:07pm I also think so brother It should be Yadanarpon! other wise check
http://travel.yatanarpon.com.mm/ it was justastatic web site ! linking with sub domain !
A web portal shouldn't be like that!
and the search didn't work on travel.yatanarpon.com.mm !
Lets say about search on that page!
Its have problem usingSSL Maximun length! and there has alot of requirements!
Do we Have to say 'YTP'Suck?
Permalink Reply by Myint Kyaw Thu on October 3, 2010 at 10:48am ဝေဖန်ရရင် Categories စုံတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ Bagan လို update မဖြစ်ဘဲ တခါလာလဲ တွန်ခရု မျက်နှာကြီးဘဲ ထိုင်ကြည့်နေရရင်တော့ မမိုက်ဘူးပေါ့။ :P အကြိုက်ဆုံးကတော့ game review ဘဲ (Toy Story review ကြီးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ review တွေအကုန်ကြိုက် :D )
Permalink Reply by Wayne on October 3, 2010 at 12:55pm pro ဆန်တဲ့ review ကြီးကို ပြောရက်လေခြင်း :P
Permalink Reply by cyberknight on October 3, 2010 at 3:31pm I can't register.
Always showed "cannot open socket".
Should I say "ypt sucks" now? :D
Permalink Reply by Myint Kyaw Thu on October 3, 2010 at 3:45pm Does anyone try YTalk? (so much creativity in naming after GTalk btw :P) It's re-branding of Miranda IM Read the License txt after you installed YTalk! It's so funny :D
Permalink Reply by Aung Aung on October 3, 2010 at 9:48pm သားတို့ရွာမှာ ကော်နတ်ရှင် နှေးတော့ Refresh နောက်တစ်ခါနှိပ်မှ စာမျက်နှာက ပေၞပါတယ်...
အဲဒီတော့ မှတ်ပုံလည်း မတင်ရဲသေးဘူးဗျာ . .
Ymail တော့ မသုံးရဲဘူး၊ Yahoo က တရားစွဲမှာ စိုးလို့ :P
.ico ပုံက တစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ :D
Permalink Reply by cyberknight on October 3, 2010 at 10:16pm So much for the "big" budget they are using.
It's better not to expect too much.
Permalink Reply by Myint Kyaw Thu on October 4, 2010 at 9:55am အစိုးရဌာနတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း vision မရှိဘဲ budget ဖြုံးတီးရာ တခုလို့ဘဲ မြင်ပါတယ်။ ”ရှိတယ်”ဆိုတာ ပြဖို့သက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ ”အောင်မြင်တယ်”တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ဖို့မဖြစ်နိ်ုင်ပါဘူး။ Biggest Myanmar Portal တခုဟာ Myanmar အများစုကို ဘယ်လိုမှ capture လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပါ။ ဒီအတွက် vision ချတဲ့သူတွေကချပေမဲ့၊ တကယ် implement လုပ်တဲ့ “ခေါင်းဆောင်မှု” အပိုင်းမှာတော့ ဖြစ်ကတဲ့စမ်း လုပ်တဲ့သဘောဘဲ တွေ့ရပါတယ်။
News မှာဆို ဦးဦးဖျားဖျား သတင်းတွေ တင်ရင် (ပြည်တွင်းပြည်ပ) လူတွေဝင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အားသာချက် -> Journal ထက်မြန်အောင် တင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ဆို news တခုထဲနဲ့ လူဝင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ Entertainment ဒီအတိုင်းဘဲ။ Movie မှာရုံတင်နေတဲ့ ဗမာရုပ်ရှင် trailer တွေကြည့်လို့ရရင် တော်တော်ကောင်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ Music မှာတော့ ဘာမှနှိပ်လို့ မရသေးဘူး။ နောက်ကျရင် တကယ် download လုပ်ခွင့်၊ နားထောင်ခွင့်ပေးမှာလား? copyright ကျတော့ကော? ပြည်တွင်းက အနုပညာရှင်တွေဆီက “national portal ဘဲကွ” ဆိုပြီး အနုပညာဓားပြတိုက်တာ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ international music တွေပါတွေ့နေတော့ ဒီလို ခိုးတာတော့ ကောင်းမယ်မထင်ဘူး။ တကယ် license လဲဝယ်မှာမှ မဟုတ်တာ။ Game မှာဆိုလဲ ဒီလိုဘဲ။ သူများဆီမှာ မရှိတဲ့ game review လေးတွေ ဖတ်လို့ရရင်၊ game အကြောင်းဝါသနာတူချင်း ဆွေနွေးလို့ရရင် ကောင်မယ်။ ခုတော့ MMGamers.com က review ကြီးတွေ copy-paste (ဒါကိုယ်လုပ်နေလို့သိတာ)။ ခုတော့ သူများဆီမှာ မရှိတာ တခုမှမရှိဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် လူဝင်မတုံး။ တခြားနေရာတွေမှာ ရနေတာ အဲဒီနေရာတွေဘဲ သွားမှာပေါ့။
YMail တို့၊ YTalk တို့ကတော့ “ငါတို့လဲ လုပ်တတ်တယ်” ဆိုတာပြတာ သက်သက်ဘဲ (ပြီးတော့ အဲဒါတွေက open sourced ကိုခိုးထားတာတွေ အထက်ကတော့ သိမယ်မထင်ဘူး)။ ဘယ်သူမှမသုံးတဲ့ အဲလိုအရာတွေမှာ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး လုပ်နေမဲ့အစား တခြားမှာ အများကြီး သုံးလို့ရတယ်။ Yellow Page နဲ့ Tourism လိုဟာတွေတော့ ကြိုက်တယ်။ အဲဒါတွေက Update လုပ်စရာလဲ မလို၊ အသုံးလဲ များမှာကိုး။ Social Network ကကော တကယ်အောင်မြင်အောင် လုပ်မှာလား၊ “for show” သက်သက်လား။ “လူ”ရှိမှ အောင်မြင်နိုင်တဲ့ social network မှာ vision မရှိ၊ လူတွေကိုမှ မဆွဲဆောင်နိုင်ဘဲ for show၊ budget ရလို့လုပ်တာဆိုရင်တော့ အောင်မြင်ပါလိမ့်အုံးမယ်။
နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ GMail၊ GTalk နဲ့ FaceBook လိုမျိုး လိုက်လုပ်တာဆိုရင်လဲ လူသုံးအောင် vision မှန်မှန်နဲ့ လုပ်ပါ။ ဗမာအကြိုက် ဗမာဘဲ သိတယ်။ အောင်မြင်အောင် လုပ်ယူလို့ရတယ်။ ”For show” ဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာ သုံးမဲ့ budget လေးကို မူလတန်းကလေးတွေ သင်ရိုးညွန်းစာအုပ်လေးတွေ ၀ယ်ပေးလိုက်တာမှ ကောင်းအုံးမယ်။
ဝေဖန်တာထက်စာရင် အကြံပေးချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ နားထောင်မှာမှမဟုတ်တာ။ ဘာကြောင့်ဆို Implement လုပ်ဖို့ ဦးဆောင်သူမှာ ဘာ vision မှမရှိဘူး။ လူမသုံးတဲ့ နောက်ထပ် portal တခုဘဲ ဖြစ်နေအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်။